Ama-Dental Bibs alahlwayo, amaphakethe okufakelwa kwamazinyo - i-Vayu
Hlala unikezela nge-One-Stop-Solution njalo ukufika kuyo
I-SHANGHAI JPS Dental Dental, LTD ibilokhu ihlinzeka ngemikhiqizo yamazinyo kumakhasimende avela emazweni angaphezu kwezi-80 nezifunda. Imikhiqizo yethu yamazinyo eyinhloko iyimishini yamazinyo efana nokulingisa kwamazinyo, isitulo esigibele iyunithi yamazinyo, iyunithi yamazinyo ephathekayo, i-oyela compressor yamahhala ne-autoclave, njll. Nokulahlwa kwamazinyo okufana nokufakwa kwezimpahla, ibhibhi lamazinyo, iphepha le-crepe, njll.
I-CE yethu ne-ISO13485 ikhishwe yi-TUV, Germany.
IBHIZINISI LAKHO ETHEMBEKILEYO UMlingani ECHINA
I-compressor yomoya engenawo uwoyela
weluleka ukuthi ukhethe
I-JPS Dental inikeza imikhiqizo ethembekile ne-One Stop Solution yawo wonke amakhasimende.
Cishe iminyaka engama-20 ebhizinisini lamazinyo nezokwelapha
I-ISO 13485 iqinisekisiwe futhi imikhiqizo engaphezu kwengu-60 ine-CE
Ucebile unolwazi ngamathenda kahulumeni
Isixazululo se-One Stop sokuthenga okuphelele
I-JPS yamazinyo Simulator
I-High Quality Dental Teaching Simulator Yokuqeqeshwa Kwamazinyo
Amakhasimende aseBrithani athi:
I-JPS Group, abathengisi bethu abathembeke kakhulu bezinto zokubhala. Siyajabula ngekhwalithi yezinsizakalo zakho futhi siyakwazisa ukuphendula kwe-JPS nobungcweti ebhizinisini. I-JPS ithembekile futhi ngenxa yalokhu, sikwazile ukugcina amakhasimende ethu enelisekile. Sizobe sibheke phambili ebudlelwaneni bebhizinisi obuqhubekayo obuhle kakhulu.
Amakhasimende aseSweden athi:
Phakathi kokuqubuka kwegciwane lesifo esiwubhadane, ukukhungatheka nokwethuka kudlulele emazweni ngenxa yokushoda kwezinto zokuzivikela. I-JPS inyukile futhi yalethwa ngokunemba nekhwalithi. Esikhathini lapho izinto zazibonakala zingenakwenzeka, i-JPS yakwenza kwaba nokwenzeka. Kithina i-JPS inguzakwethu impilo yonke!
Kusukela yasungulwa eminyakeni eyi-11 eyedlule, i-JPS Dental izibophezele ekunikezeni amakhasimende nge-ONE STOP SOLUTION yemikhiqizo ethembekile etholile idumela elihlaba umxhwele embonini yamazinyo futhi ithole ukwethenjwa okubalulekile kumakhasimende emhlabeni jikelele.